Mustafe Cagjar Oo War kasoo Saaray Dagaalka ka Socda Gobolka Tigreega – Heemaal News Network
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomalida ayaa sheegay in haddii Ururka Xoreynta Tigray ee TPLF aan la soo afjarin inay khatar galeyso wadajirka iyo midnimada Itoobiya.
Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar oo Telefishinka Aljazeera u warramay, wuxuu si weyn u taageeray go’aanka ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ee ah in howlgal militari laga fuliyo gobolka Tigray kaas oo ka dhan ah TPLF.
“Ra’iisal wasaaraha Itoobiya labada sano iyo barkii la soo dhaafay wuxuu diyaar u ahaa, dadaal adagna uu u galay, sidi khilaafka jira wadahadal looga dhammeyn lahaa, balse Kooxda TPLF ayaa jebisay dhammaan nidaamyadii siyaasadeed ee ka jiray dalka Itoobiya dastuurkii bey baalmareen iyaga oo doorasho sharci darro ahna qabsaday”,ayuu yiri Mustaf.
Mustaf wuxuu maamulka Tigray ku eedeeyay in mas’uuliyiin sare oo deegaankaasi ka mid ah ay baahiyeen inay haystaan gantaallo ay riddadooda gaareyso ilaa iyo 700 oo km, oo ay ugu talagaleen inay ku duqeeyaan caasimadda Itoobiya iyo magaalooyinka kale.
Gobolka Tigray waxaa weli ka socda howlgalka militariga dowladda oo Abiy Axmed uu ku tilmaamay in uu yahay mid lagu soo celinayo xasilloonida. Golaha federaalka ee dalkaas ayaana dhowaan sheegay in xilka laga qaaday madaxda gobolkaas.
Wax Ka Ogow Taariikhda Lamaanha Qaxootiga Ah Ee Soo Saaray Talaalka Covid-19
Diyaarada Air Jabuuti Oo Shil ku Gashay Garoonka Diyaaradaha Garawe.
Dagaalka Itoobiya kula Jirto Tigrey Oo ka Socda Xadka Eritrea.